आजबाट फेरि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शुक्रबारदेखि फेरि सुरु हुँदैछ । नेता खुमबहादुर खड्काको निधनको कारण चैत १६ गतेदेखि स्थगित भएको बैठक विहान ११ बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको हो ।
बैठकमा यसअघि बोल्न बाँकी सदस्यले धारणा राख्नेछन् । बैठकमा अहिलेसम्म ४२ केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखिसकेका छन् । बैठकमा चुनावमा पार्टीले ब्यहोर्नुपरेको हारको समिक्षा र अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेको योजना निर्माणलगायत विषय छलफलको मुख्य विषय रहँदै आएको नेताहरुले जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडाैं । सरकारले धर्म परिवर्तन गराउन चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई निरुत्साहित गर्ने कठोर नीति ल्याउन लागेको छ ।विदेशी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले धर्म परिवर्तनमा संलग्न भएको गुनासो आइरहेकै बेला सरकारले यस्ता गतिविधि निरुत्साहनका लागि संस्थाको सम्बन्धन एवं दर्ता खारेज गर्ने कानुन ल्याउन लागेको छ ।
दीपक मनाङेलाई ३ वर्ष जेल
काठमाडाैं । भूमिगत भएको ५ महिनापछि पक्राउ परेका डन पुष्ठभूमिका फरार सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) तीन वर्ष जेल बस्नुपर्ने भएको छ। ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा उनलाई ५ वर्ष जेल सजाय भएकोमा उनी २ वर्ष मात्र जेल बसेका छन्। गत २ माघमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन (हाल उच्च अदालत) को फैसला सदर गरेपछि उनी फरार भएका हुन्।
आयुक्तले खाएछन् ८३ लाखको चिया
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि कति वैदेशिक सहायत प्राप्त भयो ? त्यो सहायता कहाँ खर्च भयो ? यसको विवरण आयोगले महालेखापरिक्षकलाई समेत उपलब्ध गराएन नै– त्यहाँभित्रको अनियमितासमेत भित्रभित्रै लुकाएको छ ।
देउवालाई अझै फसाद !
काठमाडौं । नेता खुमबहादुर खड्काको असामहिक निधनपछि स्थगित नेपाली काँग्रेसको निर्वाचन समीक्षा बैठक आज शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ । यो बैठक जति लम्बियो यसले दलभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा उति नै कमजोर बन्दै जाने देखिएको छ ।
उडानमा सेल्फी तस्बिर खिचे पाइलटलाई ग्राउन्डेड गर्नेसम्मको कारबाही !
काठमाडाैं । नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस उडाउने एक सेलिब्रिटी पाइलटले यात्रु उडानमा रहेका बेलामा खिचेका सेल्फी तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा छयापछयाप्ती देखिन्छन् । आगामी दिनमा चालक दलका कुनै पनि सदस्यले यसो गर्न पाइने छैन। यसो गरेको भेटिए पाइलटलाई ग्राउन्डेड गर्नेसम्मको कारबाही हुनेछ।
सिन्डिकेट विरुद्ध यसरी भिड्दै सरकार
काठमाडाैं । सिन्डिकेटको प्रवद्र्धन गर्दै आएको यातायात व्यवसायी महासंघको आन्दोलनमा सरिक हुने नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एसोसिएसनलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपछि यातायात व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
स्वेच्छिक अवकाश चाहने कर्मचारीलाई अव पायक पर्ने स्थानमै खटाउने
काठमाडाैं । स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएका कर्मचारीलाई अवकाश नदिई सरकारले अव पायक पर्ने स्थानमै खटाउने भएको छ। सरकारले स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज कार्यान्वयन नगर्ने घोाषणा गरेलगत्तै असन्तुष्ठ बनेका कर्मचारीलाई सकभर रोजेकै पायक पर्ने स्थानमा खटाउने भएको हो।
नेपालमा रेल ल्याउन भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका वेला भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाउने सम्झौता भयो । त्यसलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग चीनको केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भयो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मालिन्हो एयरको जहाज ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो
काठमाडौं । बिहीबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मालिन्दो एयरको जहाज ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको छ । काठमाडौंबाट मलेसियाको क्वालालम्पुरतर्फ उड्न लागेको उडान नम्बर ओडी १८१ जहाज धावनमार्गबाट चिप्लिएर घाँसे मैदानमा पुगेको थियो ।
राति पौने १० बजे टु जिरो अर्थात उत्तरी क्षेत्रबाट दक्षिणी क्षेत्र अर्थात् जिरो टु तर्फ जहाज गइरहेको थियो । मोडिएर पुनः उत्तरी क्षेत्रतर्फ आउने बेला १३९ यात्रु रहेको जहाज धावनमार्ग छाडेर करिब १४० फिट पर पुगेर भासिएको थियो ।